Pakutarisa - Iye zvino unogona Kubhadhara mu4 nePayPal
Ingosarudza Bhadhara Gare gare pakubuda pamamirioni ezvitoro zvepamhepo uye kupatsanura mari dzako mu4 - imwe chete vhiki mbiri. Haisi yemubereko, haina zvainoita pachikwereti chako uye inotsigirwa naPayPal.*
Chii chinonzi Pay mu4?
Kubhadhara mu4 chinhu chinokutendera kupatsanura kutenga kwako muzvikwereti zvina, nemari yepasi inobhadharwa panguva yekutenga uye 4 inotevera yekubhadhara yakapihwa vhiki mbiri dzoga dzoga.
Ndichakwanisa here kushandisa Kubhadhara mu4?
Tiri kupa Kubhadhara mu4 kune inowedzera nhamba yevatengi vedu veUS. Kuwanika kunoenderana nedunhu rako rekugara uye unofanirwa kunge uine makore gumi nemasere ekuberekwa (kana zera revakawanda mudunhu rako) kuti unyore. Iwe unofanirwa zvakare kuve neayo PayPal account mune kumira kwakanaka kana kuvhura iyo PayPal account kuti unyore.
Kubhadhara mu4 hakuwanikwe kune vamwe vatengesi uye zvinhu. Kana iwe ukasarudza Bhadhara mu4 senzira yako yekubhadhara paunotarisa nePayPal, iwe uchaendeswa kuburikidza nekuita maitiro. Iwe unozowana sarudzo ipapo ipapo asi havazi vese vanozotenderwa zvichienderana nekutarisa kwedu kwemukati.
Ndingaite sei kubhadhara nePay mu4?
Ingosarudza kubhadhara nePayPal paunotenga online uye kana chiri chakakodzera kutengeserana, iwe uchaona Bhadhara mu4 seimwe yenzira dziripo dzekubhadhara. Ingokumbira kuti ubhadhare muPay muhurongwa hwe4 mumatanho mashoma, tora sarudzo ipapo, uye pedza kuongorora.
Ndezvipi zvekutenga zvinokodzera Kubhadhara mu4?
Iwe unogona kushandisa Bhadharira mu4 yeanokodzera yekutenga mota mutengo pakati pe $ 30 kusvika $ 1,500.
Ndeapi mamiriro uye mamiriro ePay yangu mu4 chirongwa?
Iwe unofanirwa kuverenga chibvumirano chechikwereti chePay yako mu4 chirongwa usati waendesa chikumbiro chako. Iwe uchaona chinongedzo kuchibvumirano chechikwereti paunosarudza kunyorera Kubhadhara mu4 pakubuda. Iwe zvakare uchave nesarudzo yekurodha chibvumirano chechikwereti.
Kana chirongwa chako chikangotanga, tinokutumira email ine ruzivo rwakakosha nezvePay yako muhurongwa hwe4, kusanganisira nzira yekuwana yako chibvumirano chechikwereti.
Pane here chero fizi inosanganisirwa nePay mu4?
Iko hakuna mubhadharo wekusarudza kubhadhara nePay mu4, zvisinei kana ukanonoka kubhadhara unogona kubhadhariswa mari yekunonoka.
Kubhadhara kwangu muhurongwa hwe4 kunotora nguva yakareba sei?
Zano rako rega rinogara kweanopfuura mavhiki matanhatu zvachose. Iyo yekubhadhara pasi ichave yakakodzera panguva yekutenga uye 6 inotevera inotevera kubhadhara ichatorwa yega yega gumi nemashanu mazuva apfuura.
Ndekupi kwandinogona kubhadhara nePay mu4?
Bhadhara mu4 inowanikwa kushandiswa kune vatengesi vakasarudzwa uko PayPal inogamuchirwa. Shanduko dzinogona kuitwa mumari dzese dzinotsigirwa nePayPal, kwete USD chete. Zvekutengesa zvisiri muUSD, PayPal inozoshandura otomatiki huwandu hwacho kuita USD panguva yekubhadhara usati wakupa yako Pay mu4 chirongwa. Mari yekushandurwa kwemari inoshanda seyakaiswa mune yako PayPal Mushandisi Chibvumirano.
Usatora Chifaro kana wakabhadharwa zvakakwana mumwedzi mitanhatu pakutenga kwe $ 6 kana kupfuura paunotarisa nePayPal Kiredhiti.
Chimbadzo chinobhadhariswa kuaccount yako kubva pazuva rekutenga kana iyo bharari isina kubhadharwa zvakazara mukati menguva yekusimudzira. Mari shoma yemwedzi pamwedzi inodiwa.
Zvichienderana nekutenderwa kwechikwereti.
"Karman Healthcare ndiyo nyika inotungamira mukugadzira newiricheya innovation"
Karman inopa yakazara mutsara wewiricheya, vanofamba, ma rollator, mawiricheya emagetsi & scooter, mira-kumusoro mawiricheya, eokisijeni zvinodzora, chengetedzo yekugezera uye zvimwe zvigadzirwa zvekuchengetedza pamba.
Nezve Karman Healthcare Zvigadzirwa
Chinyorwa uye Simba Mawiricheya
At Karman®, tine anopfuura zana mamodheru, mhando, misiyano yemawheelchair aunosarudza kubva. Tine sarudzo hombe ye Manual Wiricheya, kusanganisira Kutakura Mawiricheya, Mawiricheya akajairwa, Mawiricheya asingaremi, Ultra Lightweight Wiricheya, Ergonomic Wiricheya uye zvakawanda. Kusarudza chikamu, modhi, kara kana kunyange mutengo poindi kwakakosha kune wekupedzisira mushandisi kuti anzwisise zvizere "mamiriro ehunyanzvi" kufamba zvigadzirwa. Usakanganwa kutarisa yedu patent S-ERGO S-Rakaumbwa Seating System. Takazvipira kukutsvagira chigaro chakanakira chako cheupenyu hwako mukunyaradza, kufamba nemakwikwi sarudzo. Isu tiri Karman® vari pano uye vakazvipira kune zvako zvese zvaunoda. Isu tinotopa Kumira Wiricheya kutenderedza yedu chigadzirwa musanganiswa kusvika padanho repamusoro rezvipo mu kufamba hwiricheya chikamu.
Karman Healthcare® zvigadzirwa zvinoshandira musika wekuchengetedza kwenguva refu neicho chose chigadzirwa chinopa chinosanganisira mibhedha, midziyo, kugeza, kufamba, kufema, dialysis macheya, murwere-kutarisirwa, kuendesa uye kutakura zvekushandisa. Ikuwedzera kusvika kwayo muindasitiri yebasa, iro rekugara-kwenguva refu boka rinopa akasiyana siyana mapurogiramu anotarisana nekugadzirwa kwemukati, kuipa kudzikisira uye kutevedzera zvivakwa.
Kunaka kuburikidza kufamba
Kweanopfuura makore makumi maviri ekufambira mberi muKugadzira uye Kugadzira Wheelchair & kufamba Zvigadzirwa, Karman® Inoenderera mberi nekuvandudza uye kutungamira muPamusoro Quality Zvigadzirwa uye kukosha kusingaenzanisike. Chirevo chedu, "Kunaka kuburikidza kufamba", zvinoreva kuti isu tinobudirira pakuunza kugutsikana kune vatengi vedu kuburikidza neyedu yechigadzirwa yeakagwinya, anoyevedza, uye anoshamisa akasununguka mawiricheya. Usakanganwa kushanyira yedu yekumhara peji yakapihwa kuna Ergonomic Wiricheya uye Ndangariro Foam Makushoni kuona kunyaradzwa kwakanyanya.